‘सिंगापुरको संस्मरण’ | नेपाली पब्लिक ‘सिंगापुरको संस्मरण’ | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, ९ श्रावण बिहीबार १५:०९
आज यो संस्मरण लेख्ने ‘मुड’ चल्यो। नेपालले पर्यटन वर्ष मनाउने तयारी गर्दै छ। स्वर्गीय चक्र बाँस्तोला नेपाली कांग्रेसको पर्यटनमन्त्री भएका बेला ‘भिजिट नेपाल वर्ष’ मनाएका थिए। त्यो त्यति सफल भएन, चाहेजतिको सफल भएन। तैपनि त्यसले प्रेरणा दियो र परम्परा बसाल्यो। नेपालले पहिलेभन्दा प्रभावकारी रूपमा मनाउला? योभन्दा बढी आशा के गर्ने?
यो आलेखमा पाठकलाई सानामसिना, झिँझो पनि लाग्ने ससाना घटना र प्रसंग उल्लेख गरिएको छ। सर्वप्रथम त त्यसबेलाको ‘भिजिट नेपाल’ कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइराला कोलकाता प्रचारप्रसार गर्न जानुभएको रहेछ। त्यसबेला कोलकाताको पाँचतारे होटलमा भएको कार्यक्रम भव्य थियो। हामी दुई जना पत्रकार सुदर्शन पाण्डे र म पनि थियौँ। कार्यक्रम अंग्रेजी भाषामा भए। सबै परम्परागत विवरण डाटा प्रस्तुत भए। मलाई चित्त बुझेन।
पत्रकारको पनि बोल्ने पालो आयो। पाण्डेजीलाई बोल्न भनेको, मलाई हिन्दी र अंग्रेजी दुवै आउँदैन हो ! नेपाली बोलेर काम छैन। मैले आफ्नो भाषणमा, ‘मेरालागि हिन्दी र अंग्रेजी दुवै विदेशी भाषा हुन्। म हिन्दीमा बोल्छु’ भनेँ। कोलकाता हिन्दीप्रेमी शहर हो। दक्षिण भारतजस्तो होइन। पहिलो ताली आइहाल्यो। वक्तालाई ताली बजेपछि उत्साह आउने रहेछ।
‘भिजिट नेपाल’बारे जो भन्नुपर्ने कुरा मलाई छुटेजस्तो लाग्छ। भारतका ठूलाठूला नेता नेपाल आएका बेला पशुपति जान्छन्, दर्शन गर्छन्। शक्तिपीठमा गएर पूजा गर्छन्। कोलकाताको पूरा बंगाल र आसाम शक्ति पूजा गर्छन्। त्यसैले नेपाल आएर कामाक्षमाईकी दिदी, कोलकाताको महाकालीकी बहिनी गुह्येश्वरी र दक्षिणकाली काठमाडौँमै पर्छन्, आउनुहोस् दर्शन पूजा गर्नुहोस्। भोलिपल्ट हिन्दी पत्रिकाले यसैलाई महत्त्व दिए। हेर्दा सानो तर कहाँ के भन्दा प्रभाव पर्छ, त्यो गरिन्न।
सिंगापुरको वर्णन कताबाट, कहाँबाट, केबाट गर्ने? मुस्ताफास्थित सुपर मार्केटमाथि दुई तला होटल रहेछ। त्यसैमा एउटा रुम प्राप्त भयो। एक्लो मान्छे। थाइल्यान्डको फुकेट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट सिल्क एयरमा सिंगापुर पुगेको हो। बस्न चैँ महँगो, खान चैँ सस्तो। दश खिली बट्टाको ‘डनहिल’ चुरोट तीनचार क्यान ‘हेनिकन बियर’ दिनभरिमा सकिन्थ्यो। नास्ता दक्षिण भारती दोसा, इटली, बेलुका चाइनिज दारुपानी।
दुई दिन लगाएर चिडियाखाना घुमियो। हो, होइन संसारमा भएका सबै प्राणी त्यहाँ छन् भनिन्छ। पहिलो दिनको ड्राइभरलाई भोलि आउनु है भनेर पठाएको थिएँ, आएछ। अफगानबाट आएर सिंगापुर बसेको रहेछ। पहिलो दिन त कुरा भएन तर अर्को दिन सोधैँ, ‘तेरो आफ्नै ट्याक्सी हो?’ उसले भन्यो, ‘कहाँ ट्याक्सी किन्न सकिन्छ र ! पाइँदैन, सिन्डिकेट छ। मालिकका ट्याक्सी हुन्।’
हाम्रो काठमाडौँमा त बैंकबाट ऋण लिन्छन्, एक वर्षमा आफ्नो बनाउँछन्। ड्राइभर छक्क पर्‍यो। एउटा कुरा सोधौँ भन्यो, सोध न भनेँ मैले। दुईपटक चिडियाखाना हेर्न किन आएको? ब्रिटिसका पालामा कोलकाताको नाम थियो, अहिले सिंगापुरको छ। नेपालमा यस्तै चिडियाखाना बनाऊँ भनेर आएको। नेपालीको यस्तै बुद्धि हुँदोरहेछ। त्यै भएर पो यत्रो इज्जत रहेछ। विचरा त्यो ड्राइभर अखबार पढ्दो हो। हिजोआज नेपालबारे के सोच्ला?
सन्तोषा घुम्न पनि दुई दिन लाग्यो। सिंगापुर गएर सन्तोषा टापू घुमेन भने सिंगापुर गएको मानिँदैन भन्ने लन छ। सन्तोषा जान बाहिर ट्याक्सी पर्खेको थिएँ। एउटा सरदारजी भेटियो। ट्याक्सीमा किन खर्च गर्छस्, लाइनबस सस्तो पर्छ भन्यो। मैले त ट्याक्सीमै जाने भनेँ। ट्याक्सीमा ड्राइभरले धेरै कुरा बताउँछन्। यसपटक गफाडी चाइनिज ड्राइभर परेछ। त्यसले सुनायो, चीनमा हाम्रो सानो घर थियो रे ! कुखुरा, सुँगुर पालेको। हजुरबा, हजुरआमा। हामी त एउटा डब्बा अर्थात् सानो फ्ल्याटमा छौँ। एक हप्तामा मात्र भेट हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सारै महँगो छ। त्यसबाट पनि धेरै कुरा थाहा भयो। गफगाफ गर्दागर्दै सन्तोषा आइपुगियो, सजिलै राम्रै।
सन्तोषा केबुलकारको के कुरा गर्ने? त्यहाँका टिकट काट्ने सुन्दरी कर्मचारीको व्यवहार। पहिलो प्रश्न त एसीवाला डब्बामा जाने कि नन् एसी? मैले भनेँ, किन? ‘कोही मन पराउँदैनन्। अलिकति एसी महँगो छ। तर, एसीमा गए नै राम्रो,’ उसले भनी। मैले एसीवाला नै लिएँ। तीन फोल्ड भएको टिकट दिई। पहिलो पडाउमा दश मिनेट, दोस्रोमा जाति मन पर्छ, तेस्रोमा पन्ध्र मिनेट घुम्दै जानु। सजिलै पुगियो।
सारा सिंगापुरको दृश्य त केबुलकारका पडावले देखाउँदा नै रहेछन्। त्यसपछि समुद्री माछाको विशाल एकुरियम। आजको दिन सन्तोषाको त्यो समुद्री ड्र्यागनको टुप्पोमा पुगेर हेर्दा सकिन्छ। अनि उतै लागेँ। तलबाट हिँड्दै जानुपर्ने। उनीहरूले कठपुतली जस्तो एउटा प्रविधिबाट त्यो जन्तुले दिएको दुःख, सिंगापुरे जनताले गरेको संघर्ष सबै देखाएका छन्। हाम्रो दरबार संग्रहालयमा पनि त्यो नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनको वीरेन्द्र वंश हत्याको सबै दृश्य बनाएर राखे धेरै खर्च लाग्दैन नि? त्यो गर्दैनन्। सिंगापुर गएर त्यहाँ पुग्दैनन् होला। आएपछि बिर्सन्छन्। त्यो घटनाको कठपुतली चित्र राखे कति राम्रो हुने हो। धेरैलाई रुवाउने थियो।
भोलिपल्ट डाँडा नचारी सीधै गएर हेरेँ रेलमा पैदलै गएर, चिडियाखानामा पनि रेल राखिदिएको छ। गोरखा सैनिकको पनि सम्मान गरेर राखिदिएको रहेछ। सिंगापुर धनी भएको समुद्री मार्गबाट हिँड्ने जहाजमा तेल हालेर हो। त्यो तेल हाल्ने ठाउँ हेर्ने टावर पनि बनाएका रहेछन्। सन्तोषाबाट हेरेर फर्कंदा केबुलकारभरि सोचेँ, सन्तोषा पूरा टापूलाई यत्रो टुरिज्म हब बनाउन कति खर्च गरे होलान्? कति हो कति।
अर्को दिन ३ बजे फुकेट फर्कने टिकट कन्फम गरेँ। होटलमा १२ बजे चेकआउट होला भनेको पर्दैन पो भन्छ। होटलको बिल पनि घटाइदिएछ। एक सय पचास भनेर बसेको एक सय डलर सिंगापुर गरेछ। किन भनेको तपाईं पत्रकार भनेर पहिले थाहा पाएको भए अरू सुविधा पनि हुन्थ्यो। अर्को पालि आउनु होला भन्छ।
हिँड्ने दिन बिहानै मर्निङवाकमा गएको, अलिक पर दुईवटा ओभर ब्रिज कटेपछि एउटा हाइस्कुल रहेछ। सिँगारेको, सात बजे राष्ट्रपति लि क्वान यू आउने। घडी हेरेको साढे ६ बजे। हेरौँ भनेको ठ्याक्कै सात बजे साधारण भेषमा, एउटा गाडीमा, अंग्रेजी भाषण सरल भाषामा। पुरस्कार पाएका विद्यार्थीसँग हात मिलाएर पैँतीस मिनेटमा फिर्ता। यो देशको विकास यस्तो नेताबाट भएको रहेछ। हाम्रोमा भए कति तामझाम?
प्लेनमा चढ्नुभन्दा पहिले यसो एयरपोर्ट घुमेको, दिल्लीको रेलवे स्टेसनजस्तो लाग्यो। ट्रान्जिटमा आएका यात्री त झोला सिरानमा हालेर मजाले सुत्दा रहेछन्। यसो सोधेको कम्बोडिया र बर्मा जाने रहेछन्। बाहिर बजार जाऊन् भने सिंगापुर महँगो छ के गरून्? एकछिनमा दक्षिण भारतीयको हुल आयो। तपाईं कहाँ जाने भनेको मद्रास अर्थात् अहिलेको चेन्नइ। डेली फ्लाइट रहेछ। बम्बै पनि डेली। सानो एयरपोर्ट छ र? सुरक्षा व्यवस्था राम्रो।
महँगी भन्दा एउटा कुरा सम्झना आयो। थाईमा कपाल काट्दा मेसिन लगाएर थाई केटीले बिगारिदिएकी थिई। कपाल लामो थियो, राउन्ड निकालेर काट्न गएको दक्षिण भारतीय नाई रहेछ। सम्झाउन थाल्यो। घर कहाँ हो भन्छ। एक/दुई दिनमा घर पुगिहाल्छस्, किन खर्च गर्छस्? पाँच डलर लाग्छ भन्छ। म यहाँबाट थाइल्यान्ड जाने हो। दुई महिना त्यहाँ बस्छु। त्यति भनेपछि बल्ल काटिदियो। मुर्गा भेटियो हलाहल गरौँ नभन्ने।
भारतीयमा गुजराती, पञ्जाबी अलिअलि धेरै दक्षिण भारती। कति राम्रा दक्षिण भारती? मन्दिरै मन्दिर बनाएका छन्। मुसलमान, चाइनिज, त्यहाँका आदिवासी, भारतीयहरूको राजनीतिमा दखल छ। राष्ट्रपति पनि हुन्छन्। मन्त्री पनि। एउटा हिन्दी फिल्मको गानाले सिंगापुर जाने प्रेरणा दिएको हो। ‘जीवनमे एकबार आना सिंगापुर।’ हाम्रो मोडल सिंगापुरै हो।
किन चाहियो विदेशी लगानी ?
नेपालमा राष्ट्रिय युवा दिवसको औचित्य?
भारतीय संविधानको धारा ३७० र…
यो गाईजात्रा कहिले रोकिन्छ ?
राजनीतिको गोलचक्करमा नेपाल